AOS-P4: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Apple Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁ | Linux မှ
ဤသည်၌ လေးပိုင်း အပေါ်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးကနေ Manzana ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် " ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာ၏ catalog စူးစမ်းဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် အက်ပ်များကိုဖွင့်သည် ကတီထွင်ခဲ့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de «Manzana ".
AOS-P2: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Apple Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
AOS-P3: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Apple Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
1 AOS-P4: Apple Open Source - အပိုင်း ၁
1.1 Apple Open Source application များ
1.1.2 ResearchKit အကြောင်းကိုအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်
AOS-P4: Apple Open Source - အပိုင်း ၁
applications များ Apple က Open Source
el en AOS ဤစီမံကိန်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအတိုချုပ်ဖော်ပြပါ။
“ ဒါဟာပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်မူဘောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး iOS app ကိုဆေးသုတေသနအတွက်အစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာစေတယ်။ ၎င်းတွင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ပြီးမျှဝေနိုင်သောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော module များပါ ၀ င်သည်။"
သင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်နေစဉ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းပိုမိုပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖော်ပြသည် -
“ ၂၀၁၅ မှာ ResearchKit ကိုသုတေသနပြုသူတွေကဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အသုံးအများဆုံးစိန်ခေါ်မှုအချို့ကိုဖြေရှင်းဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ သုတေသီများသည်အသစ်သောဆန်းသစ်သောလေ့လာမှုများကို application များမှတဆင့်ကြီးမားသောတက်ရောက်သူများထံ ရောက်ရှိ၍ ဆန်းသစ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
သူတို့ကိုသုတေသနနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်တိုးဖို့ခွင့်ပြု applications များ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့်သုတေသီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောအရင်းအမြစ်ကုဒ်ဖြစ်သော ResearchKit နှင့် CareKit နှင့်အတူတည်ဆောက်ထားသော application များနှင့်အတူဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်များနှင့်လူနာ၏စောင့်ရှောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နေကြသည်။
ResearchKit, CareKit နှင့်အခြားကိရိယာများဖြင့်များစွာသောသူတို့သည်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကိုစကေးဖြင့်သုတေသနပြုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆရာဝန်၏ရုံးခန်း၊ ဆေးရုံတစ်ခု၏ဆေးရုံသို့မဟုတ်ဆေးရုံအပြင်ဘက်ရှိလူနာများအားဂရုစိုက်သည့်နည်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်သည်။."
အများကြီးပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် ResearchKitဒီ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်မူဘောင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်နှစ် ဦး စလုံး Apple ရည်စူးပြီး သုတေသနနှင့်စောင့်ရှောက်မှု သင့်ရဲ့အပိုင်း၌ရှိသကဲ့သို့ App Store မှအက်ပလီကေးရှင်းများ ၏လယ်ယာထံအပ်နှံ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ သူတို့ကိုသုံးပါ ResearchKit နှင့် CareKitအောက်ပါကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည် link ကို.
နောက်ဆုံးဖော်ပြခဲ့သော link တွင်သင်သည်အသုံးပြုသူတတိယပါတီများကတီထွင်ထားသောအခမဲ့လျှောက်လွှာများကိုတွေ့နိုင်သည် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်မူဘောင် ResearchKit ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူအများအကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်စာရင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ လက်ရှိဖန်တီးထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ResearchKit အရတီထွင်ထားသော Open Source အက်ပလီကေးရှင်းများ
Mom Genes သည် PPD ကိုတိုက်ခိုက်သည်: ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန် App
Sarcoidosis: Sarcoidosis နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များကိုကမ်းလှမ်းရန် App ။
EPV: သန္ဓေသား placenta (EPV ခန့်မှန်း Placental Volume - EPV) ၏ကြီးထွားမှုကိုလိုက်နာရန် App ။
ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်း Tracker: ပြင်းစွာထိခိုက်လှုပ်ရှားခြင်းခြေရာခံရန်နှင့်သူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် App ။
Epi Watch: ဝက်ရူးပြန်ရောဂါတိုက်ခိုက်မှုနှင့်အခြားဒေတာများ (အစပျိုး / ဆေးဝါးများ) ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်း။
မှဲ့ Mapper Melanoma လေ့လာမှု: အရေပြားမှဲ့များကိုမြေပုံဆွဲခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည့်အတွက် Melanoma ၏အန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
မာနလေ့လာခြင်း: LGBTQ ၏လူ ဦး ရေ၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြီးစားရေရှည်ကျန်းမာရေးလေ့လာမှုအတွက်အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းအတွက်အက်ပလီကေးရှင်း။
MyHeart အရေအတွက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု၊ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုတိုင်းတာရန် App ။
WebMD ကိုယ်ဝန်အနာဂတ်မိဘများအတွက်စိတ်ချရသောကျန်းမာရေးအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ သင့်ကလေး၏တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်တိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကိုသင်စောင့်ကြည့်နိုင်သောကိုယ်ဝန်ဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အက်ပလီကေးရှင်း။
မှတ်ချက်ဖြေ - သတိရပါ၊ ရှိပြီးသားတခုစီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာဖို့၊ Apple Applications ကိုဖွင့်ပါအောက်ပါကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုခေါ်နိုင်သည် Open Source - Apple Developer (ပွင့်လင်းရင်း - Apple Developer) y MacOS Forge (macOS Forge).
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤစတုတ္ထတူးဖော်ရေးအပေါ် «Apple Open Source», Technological Giant ၏တီထွင်ထားသောအသစ်တစ်ခု၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း။ အသုံး ၀ င်သောပွင့်လင်းသောလျှောက်လွှာအသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းပါ «Apple»; တစ်ခုလုံးအတွက်, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » AOS-P4: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Apple Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁